उम्मेदवारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाऊ « प्रशासन
उम्मेदवारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाऊ
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:२७
काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता उम्मेदवारमाथि लगातार आक्रमण भइरहेका छन् । शुक्रबार मात्रै दुई ओटा आक्रमण गरिएका छन् ।
नुवाकोटको काउथेलामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रामशरण महतलाई लक्षित गरी बम बिस्फोट गरिएको छ भने रोल्पामा समामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महरालाई लक्षित गरी दुई ओटा बम बिस्फोट गरिएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक सातायता देशैभर झण्डै आठ ओटा आक्रमणका घटना भएका छन् । बिहीबार मात्रै रोल्पामा कांग्रेस जिल्ला सभापति अमरसिंह पुनलाई लक्षित गरी बम प्रहार भयो ।
आक्रमणका शृंखला लगातार घट्न थालेपछि मतदाता र उम्मेदवारमा त्रास फैलिएको छ ।
आफ्ना उम्मेदवारलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको विरोधमा केही दिनअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग उम्मेदवार सुरक्षाको माग गरेका छन् । तर, पनि सरकार आक्रमण रोक्न निरिह बनेको छ ।
केही दिनअघि गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीले चुनावविरोधी क्रियाकलापमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए । त्यसयता पनि घटनामा पूर्णविराम भने लाग्न सकेको छैन ।
किन लगातार आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् ? के सुरक्षा दिन सरकार निरिह भएको हो ? पछिल्ला घटनाले आममतदातामाझ यस्तै प्रश्न तेर्सिएका छन् ।
अहिलेको चुनाव विकास मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि जरुरी छ । तर, आफ्नो निहित स्वार्थका लागि चुनाव भड्काउने समूहले उम्मेदवारमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण गरिरहेका छन् । तसर्थ, आक्रमणकारीको खोजी गरी उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके मात्रै भयरहित निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सक्छ ।
चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नु÷गराउनु सरकारको दायित्व हो । तसर्थ, यसबारे सरकारले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
नुवाकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार रामशरण महतलाई लक्षित गरी प्रहार गरिएको बिस्फोटबाट घाइते रमेश महत । तस्बिर : रमेश महतको फेसबुकबाट